I-Virgo ne- Sagittarius zombini ibuhlungu kwaye iguquke. Belana ngomgangatho (ukuguquleka) oku kuthetha ukuba zilungelelanise.
Bonke, benza ibini ehlala iguqukayo-ayizange ibe ngumzuzu ophazamisayo apha.
Ingongoma enye yokubambelela kukuba iVirgo ikhula kwisigqi saziwayo. Bayakwazi ukumelana nokusebenza ngexesha, apho amaSagittarians ase-racy angayifumana.
I-Sagittarius engaqhelekanga idibene ne-pre-planner kuVirgo ofuna ukucwangcisa iipilisi kuqala.
Umculi ngenye yezona zibonakaliso ezinkulu zomlilo, ziqhumise ngomdla wokuhlala. Ukukhawuleza kweVirgo kukucocwa ngokucokisekileyo, kwaye kufumaneka kwindawo yokulima. Kuza kubakho umonde omkhulu kulo mmahluko kwizakhiwo.
I-Sagittarius ilawulwa yiLucky jupiter kwaye idlalwa ngokuthe tye. Umcibisi ubeka ingozi ngenxa yokuthembela ngokubanzi ebomini. Isidingo sikaVirgo sokucwangcisa imini singabonakala sinobuhlungu kwaye siphumelele uvuyo. Iyakwazi ukuziva i-claustrophobic.
Umlawuli waseVirgo nguMercury (kwaye ngoku kutsho uCirron, "umphulukisi owonzakeleyo.") IiVrigi zinemilinganiselo ephakamileyo kwaye zifuna ukucinga kakuhle izigqibo.
Umcibisi ngumtyholi - abaninzi umdlali unqunywe kwi-clock ye-Sadge. Xa i-Sadge ibhaqazela ukuba inomotheka, into engenakuyongeza kwi- Virgo . Bayazibona i-Sagittarius eyenza ukuba bangabandekanga, ingakumbi ukuba banomdla wokuphila.
I-Virgo eqhubekayo ikhula ixhala nge-Sadge engalindelekanga.
I-Virgo ihlala ilumkile, kwaye ngelixa ulwalamano lunokuwela emgibeni wokuba 'ngumsizi,' owenza umgudu weArcher. I-Sadge ibonakala ibingenangqiqo, kunye neVirgo ibona imfuneko yokuba "iibhuleki" kulwalamano. Ngokude kakhulu kule nxaxheba ephikisanayo iya kuba yiDurgo.
Umfanekiso Omkhulu kunye neenkcukacha ezincinci
UVirgo uthanda ukumba kwincoko aze agxininiswe kwiinkcukacha.
I-Sagittarius ikhupha umnatha omkhulu kwaye ukhululekileyo kwaye unesiphazamiseko somhlaba. Zomibini zikhula xa iingcamango zingeniswa kumava okwenene. I-Virgo inezakhono kunye nesingatha kumanyathelo, kwaye i-Sadge ifaka umfanekiso omkhulu.
Eyona nto ibaluleke ngayo, kubambiswano apho bobabini baphefumlelwe, kwaye bazive bexabiswa, ukuba kungekho rhoqo i-100% eqondwa. I-Virgo inceda i-Sadge izise iinjongo phantsi komhlaba. I-Sadge ibonisa iVirgo elandela ukutshintshwa kwangaphakathi kudla ngokuhlawula, kwaye ukuzaliseka kukufanelekile ukuthatha ingozi.
UVirgo uyathanda ukudala umyalelo ngosuku, ngelixa i-Sagittarius ikhetha ukulandela ukuvuselela ukususela emzuzwana. Ingxaki iqhubeka xa i-Sadge iqala ukucwangcisa ukuhamba kwi-fly from Virgo ifuna iintshaba ukuba zicingelwe kwangaphambili.
I-Sagittarius othandweni iya kufuna ukuqinisekisa uVergo ngokuzinikela kwabo kwaye uzame ukunqanda ukungaqiniseki kwabo. Oku kubambisana kukuvelisa imfazwe yexesha elidala lenkululeko kunye nokuzinza, kwaye ibhalansi ebonakalayo iyadingeka apha. Ukuba ukuzibophezela kukho, ukwahlukana kunokusebenza ngaphandle kwexesha.
Ngaphaya: unomdla; ziguquguquke kwaye zivule ukutshintsha; ezijoliswe kwimpilo; jolise kwizinto ezizodwa; abathandayo; khuthaza ngengqondo; intetho enkulu; ezininzi izinto.
Ngaphantsi: iifilosofi ezahlukeneyo malunga nolwalamano; ngaphantsi (Virgo) ngokubhekiselele ngakumbi!
(Sagittarius); lumkele kunye nenkululeko; Ukukhula kwimihla ngemihla kudibana nomphefumlo ongenasiphelo.
I-Element kunye ne-Quality Mutable Earth (i-Virgo) ne-Mutable Fire (Sagittarius)
Ukunqoba umfazi weSagittarius
I-Sagittarius ne-Sagittarius Uthando oluhambelanayo
IMarit in Pisces
I-Super Bowl yeyona mncinci kunye naleyo imdala
Indlela Yokwenza I-Storm Glass Ukubikezela Imozulu
Ukukhethwa Kwemvelo kwiSicwangciso seSifundo
Yiyiphi "Umkhondo" wokuNciphisa?
Imihla yokuzalwa eJamani